सुडानी राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रदर्शन जारी, निकास निस्कने छाँट छैन
२o७६ जेठ ७ मंगलबार / Tuesday, May 21, 2019
२o७५ फागुन ३० बिहीबार
इजिप्ट । सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल–बासिरको राजीनामा माग गर्दै विगत तीन महिनादेखि जारी विरोध प्रदर्शनलाई अझ सशक्त बनाउने बताएका छन् । तर राष्ट्रपति बासिरले देशको शक्तिशाली सेनासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुका साथै विपक्षीका मागलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् ।
तीन दशकदेखि गृहयुद्ध र प्रतिबन्ध सामना गरेको सुडानको सर्वोच्च नेतृत्वमा तीन दशकदेखि नै राष्ट्रपति बासिर सत्तामा छन् । उनकै शासनकालमा तेलको धनी मानिएको दक्षिण सुडान सन् २०११ मा टुक्रिएको थियो भने डार्फर द्वन्द्वमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीमाथि जाति हत्या एवं युद्ध अपराधका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट जारी भएको छ ।
तर डिसेम्बरयता उनीविरुद्ध तीन दशकमै सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । अरु राजनीतिक दलहरु र युनियनहरुले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सुरक्षाफौजको बाक्लो उपस्थितिको पर्वाह नगरी सडकमा भेला भएर दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । सबैभन्दा ठुल्ठुला प्रदर्शन राजधानी खार्तुम र त्यस नजिकैको सहर ओम्डुरम्यानमा भइरहेका छन् । अरु सानातिना प्रदर्शन देशका अन्य भागमा समेत जारी छन् ।
स्वतन्त्र व्यावसायिक युनियनको छाता समूहले पनि अल–बासिरले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भइरहको छ । युनियनले नयाँ सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।
समूहकी प्रवक्ता सराह अब्देल–जलीलले सुडानी जनताका आकाँक्षा पूरा गर्न वर्तमान शासनसत्ता पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन हुनुको विकल्प नभएको बताइन् ।
“अब यो सत्तासँग मोलमोलाई गर्नु नै छैन । इतिहासले वर्तमान शासनसत्तासँगको वार्ता उपलब्धिमूलक हुँदैन भन्ने देखाइसकेको छ,” उनले भनिन् । “हामी हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रतिरोधलाई निरन्तरता दिन्छौं ।”
राष्ट्रपति अल–बासिरले राष्ट्रिय संवादका लागि आह्वान गर्नुको साटो सामान्य छुट दिन सकिने बताउँदै आएका छन् । उनले अर्को वर्ष हुने चुनावमा नयाँ कार्यकालका लागि फेरि योग्य बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । विपक्षीहरु राष्ट्रपतिको त्यस कदमको विरोधमा छन् ।
राष्ट्रपतिले सेनामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सबै प्रान्तका गभर्नरहरु हटाएर वरिष्ट सैनिक अधिकृतहरुलाई नियुक्त गरेका छन् । उनले आपतकालीन स्थितिको घोषणा गर्नुका साथै अवैधानिक भनिएका सबै भेला वा सभाहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा प्रदर्शनलाई निस्तेज बनाउन स्वविवेकीय पूर्ण अधिकार सुरक्षा फौजलाई दिएका छन् ।
अल–बासिरले गत महिना सरकार पनि बिघटन गरेका थिए । उनले मनोनयन गरेका नयाँ प्रधानमन्त्रीले बुधबार नयाँ मन्त्रिपरिषद घोषणा गरेका छन् । रक्षा र विदेश मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री स्वयंले आफू मातहत राखेका छन् ।
अल–बासिरले नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व त्यागेका छन् तर उनले पार्टी नेतृत्व कट्टरपन्थी इस्लामी नेता अहमद हारुनलाई सुम्पेका छन् । अहमद हारुन पनि सन् २००० को डार्फर द्वन्द्वसँग मुछिएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा छन् ।
अल–बासिर सेनाको समर्थनमा सन् १९८९ मा सुडानको सत्तामा पुगेका थिए ।
अल–बासिर सत्तामा रहेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अलग्गिएका छन् । पश्चिमा मुलुकहरुले प्रदर्शन हुन थालेका शुरुआती दिनहरुमा चासो व्यक्त गरेका थिए, तर त्यसयता उनीहरु प्रायः चुपचाप छन् ।
अरब मुलुकहरु सामान्यतया तटस्थ देखिएका छन् र उनीहरुको आँखामा अल–बासिर त्यति भरोसायोग्य व्यक्ति होइनन् ।
नेता अल–बासिरले पछिल्ला वर्षहरुमा भने अरब मुलुकहरुसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेका छन् । उनले साउदी–कतारी द्वन्द्वमा कुनै एक मुलुकप्रति पूर्ण समर्थन जनाएका छैनन् । छिमेकी मुलुक इजिप्टसँगको सम्बन्ध पनि दुई मुलुकबीचको लामो समयदेखिको सीमा विवादका कारण प्रगाढ हुन सकेको छैन ।
दक्षिण सुडानद्वारा कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित भएको आरोपमा ४० कूटनीतिज्ञलाई बर्खास्त
जुबा । दक्षिण सुडानले बिहीबार विदेश मन्त्रालयसँग अनुमति नलिइकन खटाइएको क्षेत्रमा अनुपस्थित रहेका ४० कूटनीतिज्ञलाई पदबाट हटाएको जनाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइकन गैरकानूनीरूपमा दक्षिण सुडानमा काम गर्दै आएका उनीहरूको
सुडानमा नागरिक–सैन्य संयुक्त सरकार बनाउने बारेमा छलफल
खार्तुम । सुडानमा आन्दोलनकारी तर्फ र सैन्य शासक तर्फबाट संयुक्त रुपमा गठन गरिएको एक समितिले सोमबार प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । वर्तमान सैनिक सरकारलाई विस्थापित गरी नागरिक–सैन्य संयुक्त परिषद् बनाउने बारेमा
सुडान सङ्कट : तीन सैनिकको राजीनामा, व्यापक प्रदर्शनको तयारी
सुडान । सुडानको सत्तारुढ सङ्क्रमणकालीन सैनिक परिषदका तीन उच्च सैनिक अधिकारीहरुले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ । राजीनामा गर्नेहरुमा परिषदको
खर्तुम । सुडानको शासन सत्ता लिएको सैनिक परिषद्ले आन्दोलनकारीहरुलाई वार्तामा आउन बुधबार आह्वान गरेको छ । नागरिक सरकारको माग गर्दै आन्दोलनकारीहरुले लगातार आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सैनिक परिषद्ले वार्ताका लागि आह्वान
विकासका काममा सहकार्य गर्न साझेदार निकायलाई कामपाको आग्रह
सुपर प्रिमियम मोटरसाइकल अपाचे आरआर ३१०, यस्ता छन् विशेषता
भारतीय टाटा मोटर्सको त्रैमासिक नाफामा व्यापक गिरावट
ऐश्वर्याको 'मेमे' शेयर गर्दा विवेक ओबराय विवादमा !
ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्ने बानी छ ? हुनसक्छ हानिकारक !
कुकुरको सहायताले लागुऔषधसहित सात पक्राउ
समान कामका लागि समान व्यवहार स्थापित हुनुपर्छ : मन्त्री विष्ट
पाँचथरको आरुबोटेमा दुई परिवारका नौ जनाको हत्या
सगरमाथा आरोहणमा कामी रिताको किर्तिमान, २४औँ पटक सफल आरोहण
पाकिस्तानमाथि इङल्याण्डको रेकर्ड जितमा बैरस्ट्रवको आक्रामक ब्याटिंग
मदन भण्डारीको लाश भेटाउँदा जागीरको आशा लागेको थियो...